Brazil Oo La Wareegtay Garoonka Ugu Weyn Caalamka Ee Maracanã - Yaa Haystay Markii Hore? - Gool24.Net
Brazil Oo La Wareegtay Garoonka Ugu Weyn Caalamka Ee Maracanã – Yaa Haystay Markii Hore?
March 20, 2019 Cabdiwahab Ahmed
Garoonka weyn ee caanka ah, Maracana Stadium ayaa si ramsi ah usoo galay gacanta dawladda kaddib markii la baabi’iyey qandaraas la xidhiidhay gacan ku hayntiisa.
Dawlad Goboleedka Rio de Janeiro ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in la baabi’iyey qandaraaska maamulka garoonka oo ay haysatay shirkad gaar loo leeyahay, isla markaana uu si rasmi ah gacanta dawladda usoo galayo 17 April.
Wilson Witzel ayaa shaaciyey in garoonku uu badhtamaha bisha dambe gacantooda soo geli doono, waxaanu si adag u tilmaamay in baadhitaano ay ku sameeyeen heshiiskii maamulka garoonka ee Consorcio Maracana uu ku jiray musuqmaasuq, si qaldanaca shirkad gaar ah loogu wareejiiyey.
Badhasaabku waxa uu tilmaamay in go’aankii lagu wareejiyey garoonku uu marka horeba ka yaabiyey maamulka Rio de Janeiro, haddana ay dib usoo ceshadeen.
Sannadkii hore, badhasaabkii hore ee gobolka, Sergio Cabral ayaa xabsiga loo taxaabay, waxaana lagu xukummay 12 sannadood oo xadhig ah, iyadoo lagu eedeeyey inuu sifo qaldan u wareejiyey garoonka Maracana oo ah kan ugu weyn ee waddanka Brazil, sidoo kalena la tilmaamo inuu dunida ugu weyn yahay.
Sannadkii 2013 ayuu garoonku gacanta u galay shirkado shisheeye kaddib markii lagu sameeyey dibu-habayn, waxaana lagu qabtay Koobkii Adduunka ee 2014 iyo ciyaarihii Olambikada ee 2016 iyadoo ay shirkad gaar ahi maamulanayso.
Bilihii u dambeeyey ayuu garoonku ahaa faaruq, waxaana sannadkii 2017 laga xaday waxyaabo muhiim ah, iyadoo la burburiyey daaqadihii iyo saqafyadii sare, lamana sheegin cidda illaa hadda loo qabtay ee falalkaas geysatay.
Maracana ayaa ahaa garoonkii lagu qabtay finalkii Koobka Adduunka 1950-kii, waxaanu hoy u yahay afarta kooxood ee Botafogo, Flamengo, Fluminense iyo Vasco da Gama.
Dalka Brazil ayaa waxa uu dhawaan marti gelinayaa tartanka qaramada Latin America, kaas oo qorshuhu yahay in kulamo ka mid ah lagu qabto garoonkan.